Guudlaawe oo kusii jeeda Beledweyne iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaalada - Caasimada Online
Home Warar Guudlaawe oo kusii jeeda Beledweyne iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaalada
Beledweyne (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad goboleedka HirShabelle, Mudane Cali Cabdullahi Xuseen (Guudlaawe) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka ku wajahan magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
Qaban-qaabadii ugu dambeysay ee soo dhoweynta wafdiga Cali Guudlaawe ayaa laga dareemayaa Beledweyne, ayada oo la xiray waddooyinka waa weyn ee gudaha magaaladaasi.
Sidoo kale ciidamo fara badan ayaa lasoo dhoobay xaafadaha qaar, kuwaas oo wada dhaq-dhaqaaqyo xoogan oo ku aadan sugida ammaanka madaxweynaha iyo wafdigiisa.
Sida ay ogaatay Caasimada Online waxaa qayb ka ah safarka Cali Guudlaawe wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, sida wasiirkla arrimaha gudaha iyo midka amniga.
Dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa laga magac baxay Kacdoonka Hiiraan ayaa ku sugan qaybo ka mid ah magaalada, ayaga oo wata gaadiidka dagaalka, waxayna dhankooda wadaan dhaq-dhaqaaqyo looga soo horjeedo socdaalka Cali Guudlaawe ku tegayo halkaasi.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana dhaq-dhaqaaqyadan cusub ay saameyn ku yeesheen guud ahaan magaalada, sida ganacsiga, isku socdka dadka iyo gaadiidka.
Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa waxaa marar badan dib u dhac ku yimid safarkiisa Beledweyn, kadib markii ay saameyn ku yeelatay xiisadda ka taagan magaaladaasi.
Si kastaba, booqashada la filayo in Cali Guudlaawe ku tego Beledweyne ayaa ku soo aadeysa, xilli haatan Muqdisho uu ku sugan yahay Xuud oo si weyn uga soo horjeeda HirShabelle, isaga oo sheegay in hadda la sameynayo dadaalada lagu dib mareeynayo.